Soo-saaraha Iftiinka Iftiinka / Qeybiyaha illaa 2004 | Laydhka LEDIA
Saaxiibkaaga aaminka ah ee OEM / ODM ee Laydhka LED-ka
Soo saaraha iftiinka Xirfadleyda LED wuxuu bixiyaa adeegga OEM / ODM
Hadafkeenu waa inaan ku qancino macaamiisheenna saxnaan sare iyo tayo la isku halleyn karo si loo hubiyo in macaamil kasta uu dareemo raaxo iyo kalsooni uu ku qabo alaabtayada dalabyadooda.
Iftiinka Daadka LED Taxanaha nalka cusub ee daadadka ee 'LEDIA' wuxuu isku daraa tamarta-wax ku ool ah, koontaroolida indhaha ee horumarsan, iyo bilicsanaanta muuqaalka dhuuban ee casriga ah si loogu gudbiyo waxqabadka kor u kaca ee codsiyada nalalka daadka. Guryo cufan oo dillaacsan ayaa bixiya maarayn heerkul horumarsan oo loogu talagalay nolol dheer iyo qolal cadeynaya cimilada si looga hor tago caqabadaha, jawiyada banaanka. Shaqada ugu Weyn Housing Guryo adag oo aluminium ah oo la shubay. Lens Muraayadaha muraayadaha cadho leh waxay u adkeysataa naxdinta iyo saameynta Proof Caddaynta miridhku iyo daxalka, maaddada budada deegaanka ◆ Noocyo tayo sare leh oo loo yaqaan 'LEDs', wax soo saar sare, nolol-dheer. Reflect Iftiin iftiin sare leh oo dhalaalaya 4 galaas qaro weyn leh. Option Xulashada dareeraha maalinta. ◆ Naxaas iyo midabbo loo habeeyey oo lagu dhammaystiray dusha budada
Nalka Wadada Iftiinka Daadka
AC100-27V / AC220-240V; Qaybta / Qaybta Buurta / Buurta Mount, Dareeraha Maalinlaha, IP65, Grey / Black Finish, 5 Sano Dammaanad, 4000K / 5000K / 6000K.
Dhajisyada dhabta ah ee IP68
Aaladda dhabta ah ee IP68 LED, oo ku habboon dibedda adeegsiga, oo ku habboon codsiga biyaha hoostiisa. IP68 strip dabacsan / nalka IP68 nalka / IP68 nalka xarig / Nalka xargaha ee dabacsan / Nalka cajaladda hoostiisa / Feejigga jilicsan ee barkadda lulmaysa / Nalka Tape ee barkadda lulid Ku habboon barkadda lulid, iftiinka tallaabada bannaanka, nalka qurxinta ee banaanka iwm
COB Flex Strip - Laydhka LEDIA
1. Taxanaha Flex ee loo yaqaan 'COB Flex Series', 'COB Flex family' Waxaa loo heli karaa hal midab, mid la fahmi karo oo cad, RGB iyo digital RGB. 2. Midab cad COB Flex, Oo loo heli karo DC12 / 24V, Min. balac 3mm. 3. Midab kali ah COB Flex, oo loo heli karo Casaanka, Cagaarka, Buluuga, Jaalaha, Cambaarka iwm. Qalabka xargaha ee loo yaqaan 'COB strip', nal aan dhibic lahayn, waxqabadka iftiinka kaamil ah, CRI sare. Xakameyn COB oo jilicsan / Nal COB cajalad / Dhibic la'aan-COB strip / Dhibic-la'aan COB light light Ku habboon iftiinka daboolka
Shirkadaha horseedka ka ah laydhka ee caalamiga ah
Tan iyo aasaaskeedii, LEDIA waxay diiradda saareysaa bixinta adeegga OEM / ODM iyo horumarinta alaabooyin kala duwan oo looxirmay oo lala-hawlgalayaashayada ah.
1. Wax Weyddiis: Macaamiisha ayaa u sheegaya qaabka foomka la doonayo, qeexidda waxqabadka, wareegga nolosha, iyo shuruudaha u hoggaansamida.
2. Naqshadeynta: Kooxda naqshadeynta waxay ku lug leeyihiin bilowgii mashruuc si loo hubiyo alaabada ugu habboon ee loogu talagalay inay ku habboon baahida macaamiisha ..
3. Maareynta Tayada: Si loo helo qaab-dhismeedyo tayo sare leh, waxaan ilaalineynaa waxtar
Nidaam Maareyn Tayo oo hufan.
4. Waxsoosaarka Caadiga ah: Marka noocyada noocyada ah loo ansaxiyay qaabeynta qaab ahaan, shaqo ahaan, iyo dalab ahaanba, soo saaristu waa marxaladda xigta.
5. Waxaan diyaarin karnaa gaadiidka amarrada - ha ahaato adeegyadeenna is-gaarsiinta, alaab-qeybiyeyaasha kale ama isku dar labadaba.
Laydhka saadaasha dibadda
Laydhka khadka gudaha
Waxaa la aasaasay 2004, Guangzhou LEDIA Lighting Co., Ltd waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo ku taal Guangzhou, Shiinaha, oo hoosaad hoos timaada HongliZhihui Group (Soo-saaraha xirmada ugu sareysa 2 ee Shiinaha). Iyadoo in ka badan 30 injineero khibrad leh iyo shaybaarka baaritaanka CNAS, maaraynta nidaamka ISO 9001/14001, LEDIA waxay siineysay alaab qiimo sare leh asxaabteena sharafta leh ee adduunka oo dhan, oo ay kujiraan Laydhka Dibada ee Dibadda, Laydhka Warshadaha ee LED, Laydhka Ganacsi ee LED iyo Laydhka Qurxinta ee LED, dhammaantood waa DLC / UL / ETL / TUV / SAA / CE / ENEC oo u qalma.
Tan iyo aasaaskeedii, LEDIA waxay diiradda saareysay bixinta adeegga OEM / ODM iyo horumarinta alaabooyin kala duwan oo dawaarle ah oo looxiriira wada-hawlgalayaashayada. Intii lagu guda jiray horumarinteena degdegga ah, LEDIA waxay ku faraxsan tahay inay aragto la-hawlgalayaasheenna oo ka sii weynaanaya suuqyadoodana doonaya inay sii wadaan xiriirkeenna adag sannadaha soo socda!
海南码开奖结果 齐鲁风采群英会走势图 好彩1开奖结果走势图 赚钱项目兼职 单机捕鱼游戏无限币版 晓游棋牌客服 海龙王捕鱼 海南4十1今天开奖结果 金博棋牌绿色安卓版 麻将规则公式 湖北十一选五预测 聚众赌博的金额是多少 七乐彩开奖结果= 贵州福彩快三走势图表 天天棋牌手机版官网 麻将来了没找到猜猜乐 开元娱乐棋牌下载app